2017 hot sale sectional rattan sofa white wicker outdoor garden patio furniture in blue cushions, Furniture from China on TopChinaSupplier.com
Indawo yokubonelela iimveliso Sofas yangaphandle I-2017 ethengiswayo eshushu yesigaba se-rattan sofa esimhlophe wicker yangaphandle yegadi yefanitshala kwifashoni eluhlaza
I-2017 ethengiswayo eshushu yesigaba se-rattan sofa esimhlophe wicker yangaphandle yegadi yefanitshala kwifashoni eluhlaza
5 Set I-US $ 15.00 / iseti
I-TANFLY ibonelela ngomgangatho ophezulu kuyo yonke imozulu ye-rattan wicker igumbi lokuhlalaisofa nal, igadi seemodyuli ifenitshala yesofa, iseti yesofa yangaphandle. It'Sifanelekile ngaphandle, kodwa sihle ngokwendawo yokuhombisa amagumbi okuhlala.
Inkcaza yeMveliso eneenkcukachaubutyhakala
1. IAluminiyam fuloliwe
2. IRattan: I-Rattan engasetyenziswanga kwakhona, yomelele kwaye ayimelani no-UV
3.Umanzi wendlu engafakwanga manzi
Kubekwe kuyo Indawo yeMveliso yaseNanlang, I-TANFLY yefanitshala yeCooper, Ltd ngumenzi ophezulu kwaye othumela ngaphandle onesininzi ngaphezulu 5 amava eminyaka, Inkampani iqokelele iqela leetalente zombini kwi-R & D, kwimveliso nakwintengiso ye isofa ye-rattan, isofa modular, iseti yokutyela, isitulo kunye netafile, isitulo sebhar, indawo yokuphumla, ifenitshala eshushu ishushu, isitulo sombane, isambulela esingaphandle iimveliso.NGOKUQINILE izinikele ekuboneleleni “ngokugqibeleleyo Ifanitshala yeRattanIsisombululo ”ku coIzixhasi emhlabeni jikelele.
Kholelwa kwinkampani yethu, i-beacuse siya kuqhubeka nokwenza okungcono:
Isikali: Iminyaka emi-4 yamava, abasebenzi abangaphezulu kwe-100 kunye nomzi mveliso weemitha ezi-6,000 ubude
Umgangatho: Kuphumelele i-SGS yamkelwe.
Umthamo: 300 * 40HQ coI-ntainers yokuxhotyiswa kwefanitshala ngonyaka.
Ukuhanjiswa: Inkqubo efanelekileyo yoku-oda ye-OA iqinisekisa ukuhanjiswa kweentsuku ezili-15-25.
Emva kokuthengisa: Zonke izikhalazo ziphatha ngaphakathi kweentsuku ezingama-1-3.
I-R & D: Umntu o-4 weqela le-R & D ligxile kwizinto ze-rattan, ubuncinci ama-3 ngonyaka iimveliso ezintsha zibekwa kwintengiso.
Isisombululo esinye sokumisa ifanitshala: Isisombululo esinye sokumisa, isofa ye-rattan, isofa modular, iseti yokutyela, isitulo kunye netafile, isitulo setawuli, igumbi lokuhlala, ifenitshala eshushu eshushu, iimveliso zambrela zangaphandle, TANFLY ibonelela ngesisombululo esifanelekileyo sefenitshala.
Kutheni ukhetha i-wicker yangaphandle?
I-wicker yangaphandle itshintshile ngaphezulu kolunye uhlobo lwefanitshala eqhelekileyo kwiminyaka elishumi edlulileyo.
Yonke into ebandakanyekayo kwinkqubo iphuculwe ukunika imbonakalo eyiyo kunye nelona nqanaba liphezulu lokuqina. Imvula, ikhephu, imbetho okanye ukukhanya, i-win yangaphandle yangaphandle inokuphathela nantoni na uMama weNdalo afuna ukuyiphosa kuyo.
Sebenzisa oIzixhobo ezisemgangathweni ezisezingeni eliphezulu, iiseti zethu zi-anti-fading kwaye azinetyhefu. Isinxibo sethu esenziwe ngesandla
Inika imbonakalo yasimahla yolondolozo echasayo yokuqhekeza kunye nokuqwengana. Iyunithi nganye igqunywe ngaphezulu a ialuminiyam yomeleleyo fUdano olunikezela uzinzo oluphezulu kunye nobude bexesha lobomi.
I-1.100% ihonjiswe ngesandla ngabakhandi abanobuchule.
Zombini zilungele indawo yangaphakathi nangaphandle.
3. Imisebe elungileyo ye-UV, amaqondo obushushu aphezulu, ukumelana nemozulu, umbala-fadade.
4. Ngokugcobhoza kwamanzi ngokukhuselekileyo yimisele ekhethiweyo.
5. I-PE rattan kunye ne-cushion & pillows umbala njengoko uthanda.
6. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu wobungakanani obuphantsi kunawona maxabiso okhuphiswano.
7. Zonke iimveliso zinika ubuncinci isiqinisekiso seminyaka emi-2.
8. I-OEM okanye i-ODM ikho.
Isiqinisekiso esilinganiselweyo: I-24 moii-nths (zibaliwe ukusuka kumhla wokuvelisa ukusuka kwi-TANFLY) yazo zonke izinto zefanitshala yefanan. Ngeli xesha leli xesha, singayifaka ifanitshala simahla endaweni yeengxaki zemveliso ezingenakulungiswa lula. Ngokuphathelele kumonakalo obangelwe zizinto ezenziwe ngumntu okanye izinto ezingenakuthintelwa, inkcitho kulungiswa kunye nezinto zokusebenza ziya kuhlawuliswa.
Zonke izikhalazo ziya kusingathwa kwisithuba seentsuku ezingama-1-3. Siyakholelwa ukuba ukuphatha kukhalaza ngexesha kunye neendlela ezisebenzayo zibonelela ngenkxaso eqinileyo kumaqabane ethu. I-profio yethuIqela le-nalsales liqinile lixhasa amaqabane ethu ngonaphakade.
Rattan & Ilaphu
Umbala we-rattan we-PE uyafumaneka: umnyama, nsundu, grey, isilivere, umbala omhlophe njl.
Umbala we-Cushion uyafumaneka: i-aniseed, turquoise, raspberry, mastic, itshokholethi, i-emerald, i-anthracite, mhlophe, njl.
Umbala weRattan kunye nombala wecushion unokuba ukhetho.
Iimveliso ezishushu zokuthengisa